Su'aallo laga keenay hadalo uu ka dhawaajiyey madaxweyne Farmaajo - Worldnews.com
Su'aallo laga keenay hadalo uu ka dhawaajiyey madaxweyne Farmaajo
MUQDISHO, Soomaaliya – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhaliilay qayb kamid ah hadalo uu madaxweyne Farmaajo ku sheegay wareysigii saddexaad oo uu bixiyey tan iyo markii la doortay.
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa su'aallo ka keenay erayadda hogaamiyaha waddanka, kuwaasoo tafaasiil dheeri ah u baahan.
"mid leyska indha tiray su'aalo badan"
Waare oo looga digay in uu maamulka doorashada ku wareejiyo DF
MUQDISHO, Soomaaliya – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweynaha HirShabelle, Maxamed Cabdi Waare, kaga digay in uu maamulka doorashada ku wareejiyo...
Gareowe Online 2020-02-08
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya, Cabdullaahi Sanbaloolshe, ayaa shaaca ka qaadey in mudadii uu xilka u hayey Nabad iyo Nolol lagu amray in uu...
Gareowe Online 2020-02-12
"Qeylada" ka dhalatay hambalyada Mareykanka ee Qoorqoor
Waxaa maalin kahor magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug lagu doortay "madaxweynaha" cusub ee maamulkaas, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor. Doorashadaas waxaa hareeyay...
NAIROBI, Kenya – Cabdikariin Muuse [Qalbi dhagax] ayaa ka falceliyey cafiskii uu dalbaday Cabdullaahi Sanbaloolshe, taliyihii sirdoonka Soomaaliya oo qirtay in uu door ku...
Gareowe Online 2020-02-02
Cabsida laga qabo in ay "isu gacan-qaadaan" DF iyo Jubaland oo korodhay
KISMAAYO, Jubaland – Warar dheeri ayaa kasoo baxaya iska hor-imaad maanta dhexmaray ciidamadda Jubaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo ka dhacay magaaladda Beledxaawo ee gobolka Gedo. Illo degaanka ah ayaa u sheegay warbaahinta in is-rasaaseynta ay timid markii cutubyada Jubaland ay soo galeen gudaha magaaladda. Askarta oo ka timid duleedka ayaa la xusay in ay daacad u yihiin...
GAROWE, Puntland – Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u baahisay xukunka dilka toogashada oo ay dowladda Puntland ku fulisay kiiska kufsiga iyo khaarijinta ee Caasha Ilyaas Aadan. Marxuumad Caasha oo la dhibaateeyay Febraayo, 2019 ayaa ahayd 12-jir la afduubtay kahor inta aan tacadi jinsi ah aysan kula kacin saddex qof oo mid wali ay baaris ku socoto. Cabdifitaax Cabdiraxmaan...
Clara Grima waxay xasuusataa daqiiqadii ay goosatay in aanay bare jaamacadeed oo xisaabta keli ah dhiga aanay noqon ee, in ay xataa dadka jeclaysiiso. Waxay ahayd 2011-kii markii inankeeda ugu yar, Ventura, oo markaa lix jir ahaa weydiiyey calaamad ku taalay funaanad ay xidhnayd, waxay tahay. "Ma miis baa mise waa gool kubadeed?" Midna ma ahayn. Waxay ahayd calaamada pi. Wada...
MUQDISHO, Soomaaliya – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shaaca ka qaadey in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu xusul-duub ugu jiro "in uu sameysto muddo kororsi laba sano ah". Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wada-hadalo arrintaan ku saabsan kula jiro gudoonka labada aqal ee baarlamaanka...
DF oo lagu eedeeyay in ay "dayacday" Soomaalida ku nool Shiinaha
MUQDISHO, Soomaaliya – Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya aysan wax gurmad ah gaarsiinin muwaadiniinta ku nool magaalada Wuhan. Wuhan, oo Shiinaha ka tirsan halkaasoo ay ku dhaqan yihiin arday badan oo Soomaaliyeed, ayaa waxaa khatar weyn ku haya cudurka Karona vayrus. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka...